Arch Linux ndeyangu here? | Kubva kuLinux
Carlos Gude | | Zvimwe
GNU / Linux Iyo inyika izere nemikana, isu tine zvakagoverwa zvakawanda zvekuti pakupedzisira haugone kuziva kuti ndeipi yaunosarudza, pane Debian, Arch, Fedora uye yakareba etcetera ye "yakachena" migove uyezve akasiyana avo, seUbuntu.
Mazhinji acho anokupa zvese zvakagadzirira kuenda, zvimwe zvinoda kumisikidzwa uyezve pane izvo zvinokumanikidza kuti udzidze, saArch.
Arch, haisi nyore kugovera, kana kuitiswa kune vanotanga, inoitirwa chero munhu anoda kuziva zvakawanda nezveLinux, avo vanoda kuziva, vasina basa nekuverenga zvinyorwa (kungave mumutauro weCervantes kana Shakespeare) uye vanoda kuziva kuti OS inoshanda sei.
Kana Arch yaiswa, usatarisira kuona mugadziri ari anotevera, anotevera, uye gamuchira. Iwe unofanirwa kuzviisa iwe pachako, gadzira izvo zvikamu nemaoko, simudza iyo SWAP, isa iyo base, iyo graphical nharaunda (kana uchida, Linux inogona kuita zvese nekunyaradza, kunyangwe tarisa mavhidhiyo eHD), igadzirire sewebhu dura, faira sevha, maprinta, media media kana muchina wekuvaraidza.
Iye chete anopa base, iwe isa zvimwe.
Kana mushure meizvi, iwe uchiri kufunga nezve kuisa Arch, ini ndinokurudzira kuti iwe uverenge zvisati zvaitika ichi chikuru chinyorwa kubva elav uye kuti iwe unowedzera kune zvaunofarira peji repamutemo re ArchLinux, iyo yaunoyedza pamushini chaiwo, kana kana iwe uchizotsvaga kuiisa pakombuta, ita imwe padhuze, kuti ubvunze zvikanganiso nemabhugi auchazowana (nekuti uchaawana zvechokwadi).
Ini ndinokusiira iwe skrini yekugadziriswa kwangu kwazvino kweArch linux yangu:
Arch linux + XFCE4 + Conky + ElementaryXFCE Mifananidzo
Ndinovimba iwe wakafarira yekutanga yezvangu zvakawanda Zvinyorwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Arch Linux ndeyangu here?
Chinhu chekutanga chandingakurudzira kune vazhinji vashandisi ndechekuti vanodzidza kushandisa Linux Mint kuitira kuti vajairire iyo GNU / Linux interface. Zvino kana ivo vachida chimwe chinhu kutosimba zvishoma, ivo vaizopfuura kuburikidza naDebian. Kune avo vanoda kupinda mukati mekoni, ini ndaikurudzira Slackware; Asi kana iwe uchitambura neshanduroitis, iwe hauna sarudzo kunze kweArch Linux.
Uye kana iwe uchida kukwidziridza Gentoo kusvika pakakwirira
Ehe. Arch yakafanana neGentoo yeDummies.
Pamwe handina kutamba naGentoo kwenguva yakareba, yakapihwa panguva iyo pavakaburitsa zviri pamutemo Arch ye64bit, mutsauko mukuita hauna kururamisa nguva yekuunganidza inotora.
Zvinoenderana nekuti unounganidza sei uye ndeapi Hardware .. kana iwe ukatarisa tarisa pano http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html uye iwe unomisikidza yakanyanya kuyedza seyunosimudzirwa, iyo yakagadziriswa distros haina chekuita kupokana neizvozvo, ndiko kuti, kazhinji system inoenda kunoparara nekuda kwekukanganisa zvikanganiso xD
Hahaha «dambudziko rakagamuchirwa»
Versionitis = Archlinux ????
Ini ndinofunga kuti Archlinux haifanire kushandiswa nevanhu vane versionitis, kune yangu chikamu ini ndinogara ndichidzokera kuArch, mushure mekuyedza distro nyowani kana apo bhagi rinondiruma kuti ndide kuyedza mamwe ma distros, Arch maererano nemaonero angu kugoverwa kwakanaka kwazvo, nerutsigiro rukuru uye zvirinani WIKI, kunze kweizvozvo iwe une hombe hombe yepakeji inonzi AUR, mauri iwe unowana kunyangwe matafura emirairo gumi yakavanzwa kumwe kunhu, saka ndingazoshamisika kana mumwe achitambura neshanduroitis, iwe unotora Arch kubva kwauri ndinokuvimbisa kuti kana uchinge waiona, hauregi ichienda, uye kana uchidaro ndeyekungodzoka uine muswe pakati pemakumbo ako. Zvino kana iwe ukapinda munyika ye linux ndinobvumirana newe kuti Linuxmint isarudzo yakanaka kwazvo, asi ndinofungawo kuti Fedora isarudzo yakanaka kwazvo sezvo ichikudzidzisa zvakawanda uye nenharaunda yakanaka kwazvo.
Chekupedzisira, pasina kudzikira kune kumwe kugovera, ndinotenda kuti Arch iri pamusoro zvakanyanya kune vakawanda uye hazvireve kuti munhu anofanira kutambura neshanduroitis kuti aishandise! kwaziso Ariki
Muchiitiko changu, Arch, nekuumburuka kwayo, inondipa vertigo nekuti kana ndikarega kushandisa PC yangu kwemwedzi mitatu, zvigadziriso zvinosvika nehukuru hwe3 GB kana kupfuura.
Arch yakanyanya kuwanda minimalist. Muchokwadi, ndakazviedza ndiri ndega uye hazvidi kuti tivimbe neAUR nekuti chokwadi ndechekuti repo yayo huru yakakwana kwazvo pachinhu chakakosha. Uye chinhu chinonyanya kufarira ndechekuti zviri nyore kuisa Arch pane PC chaiye kupfuura muchina chaiwo.
Ini ndinonzwisisa kutenderera uye kuti unofanirwa kunge wakabatanidzwa kune inet kanokwana kamwe pasvondo, asi ndiyo poindi yekuparadzirwa uku kana kwete? Iye zvino ini ndinopa nyaya yeAUR nekuti ini ndinokupa iwe muenzaniso ini ndinoshandisa purinda iyo isina madhiraivha ayo mune repos reposvo, saka ini ndinotofanira kuisa aur, kunze kwemapurogiramu mazhinji ane zvimwe zvazvino vhezheni muAUR kuburikidza neGit, ikozvino Ichokwadi kwazvo izvo zvaunotaura zviri nyore kwazvo kuisa Arch zvakananga paPC pane muchina chaiwo lol, ini ndinongova neArch palaptop yangu uye handisi kuzochinja kugovera kwenguva yakareba sezvo iri kushanda zvisingaite nemadhiraivha eamd anosanganisira !! Mufaro
Zvinoenderana nezvakawanda zvawakaisa, ini handina kuishandisa kwevhiki uye ndaive ne500Mb yekuvandudza kana_O pakati pavo iyo KDE yekuvandudza
Chinhu che KDE, chero bedzi usingasarudze zvinorema kutsamira.
Zvakanaka, ini handizive kuti nei uchienda uye uchidzoka kubva ku arch kana iwe usingatambure nechirwereitis ... kunyangwe ini ndichitsigira zvaunotaura nezve versionitis .. kutenderera kuburitsa distros kuri chaizvo kubvisa icho chinhu cheshanduro yemazhinji distros ... iyo yekupedzisira faira iyo yakaiswa pamushini wangu yaive neanopfuura makore matatu isina kumboiswa zvakare.
Carlos Gude akadaro
Yangu kuravira Linux mint ndiyo "windows" ye linux. Nyore kuisa, nyore kushandisa asi isina windows maitiro. Chaizvoizvo chero kugovera kuri 100% inogoneka uye inogadziriswa, poindi ndeyekuti vamwe vanokupa iwe uye vamwe vanokumanikidza kuti uzviite.
Ini ndakatanga mu ubuntu ipapo mint uye ndikaedza debian, ini ndaisakwanisa kugara muRetro: Ehe, ipapo ndakasangana ne arch uye ndakasangana nedenga revedu vane versionitis XD hehej 🙂 kwaziso.
Sezvavanotaura, pane chimwe chinhu kune wese munhu, uye ndine chokwadi chekuti vazhinji vakaita seArch nekuda kweiyo diki honye yekuda kudzidza uye vazhinji havazozvifarire nekuti ivo vanongoda chete sisitimu yekushandira yakagadzirira kushanda pasina kukakavara kwakawanda uye nekuti ndizvo kunze kwebhokisi distros kunge mint, korora, manjaro uye nezvimwe .
mukupedzisira iri kunze kana mukati? "Kunze kwebhokisi chimiro" inodaidzwa kunze kwebhokisi software
Croador Anuro akadaro
Ndakagara ndichizvibvunza kana zvingave kwandiri, ndichaona kuti pamwe ndinokurudzirwa kuiisa, ndinokwanisa kugara ndakaisirwa narinhi pabhuku rangu, ndinongotarisira kuti handifanire kufunga nezvazvo zvakanyanya, ko nezve kuiisa? uchishandisa virtualbox ??
Pindura Anuro Croador
Chaizvoizvo chero distro inosangana mune yakakura kana shoma chikamu nechinangwa icho mushandisi anoteedzera (icho chiri chekushandisa mushini wavo).
Kazhinji paunofunga nezve distro senge arch vashandisi vako vari kutsvaga chimwe chinhu chakanyanya kunanga.
Mune yangu kesi, arch yakandipa kuita zvakasiyana-siyana asi zvakare kuita kushoma uye kugadzirisa, saka nguva pfupi yadarika ndakadzokera kuna gentoo, zvichidaro ndichigadzirisa zvandaida zvakanyanya.
Neizvi ndinoreva kuti zvinoenderana nemushandisi uye zvavanoda panguva yakapihwa.
Parizvino, ini ndinosarudza kushandisa OpenBSD pamusoro peGentoo (haufanire kuita chero chinhu mu kernel kana marongero ayo kuti ishande zvakanaka uye yakasimba).
Zvakanaka, ini handizive zvine chekuita nazvo .. !! Mu openbsd iwe unogona zvakare kugadzira mamwe marongero uye kakawanda zvichidikanwa (ndinokuudza ruoko rwekutanga) kuitira kuti sisitimu ienderane nezvako .. izvo zvaunoda zvakajairika uye kuti iwe unowedzera kutambura nechuru 8 chimwe chinhu chakasiyana kwazvo
Ah chokwadi, asi haupedze nguva yako uchigadzirisa ruzivo rwe processor kuti iite kuti ikushandire.
Iye frikazo, usamuteerere.
@ pandev92: Vazhinji vashandisi veSpanish Linux pano (kusanganisira ini) ma geek. Zvino, izvo zvatinoedza kuzvivhura isu kune vamwe vanhu, ndechimwewo chinhu.
Archlinux haina kunetsa zvachose, chero munhu anotoziva hwaro hweGNU / linux uyo anoda kutanga neArch ndinokukurudzira kuti uzviedze, kunyangwe sekutaura kwechinyorwa, hakusi nyore kugovera chero, haisi iyo Ubuntu kana zvakafanana zvinogona kuva, Iyo distro maunovaka zvese, saka zvinogona kunetesa kuisa, asi hazvina kuoma zvachose uye kunyange kushoma nekutevera yayo yakanaka wiki (iyi ini ndinofunga ndeimwe yemasimba ayo).
Kwandiri pachangu, zvinhu zvandinofarira zvakanyanya pamusoro peArch ndezvi:
1.- Iyo KISS pfungwa (ini handizive kuti ndakakwanisa sei kurarama ndisati ndaziva iyo XD pfungwa).
2.- AUR, zvakanaka, kuti AUR haina kuchengetedzeka zvakanyanya ichokwadi, asi chokwadi chekuva nechengetedzo kuitira kuti chero munhu akwanise kurodha nekuchengetedza mapakeji anokupa iwe kunzwa kwekuve munharaunda yakavhurika kwazvo, zvakare, kana zvakanyanya ane hanya nezvekuchengetedza, unogona kugara uchiverenga iyo pkgbuild usati waisa chimwe chinhu.
3.- Pacman, kwekuravira kwangu, akanakisa maneja wepakeji ini ndakaedza.
4.- Wiki yako, yakanakisa yandakaona kusvika ikozvino.
Uye zvinhu zvandisingade nezve Arch:
1.- Kugadzikana kwemapakeji, zvakanaka, zvakanaka kwazvo kuve nezvazvino, asi dzimwe nguva zvakakosha kuve nePC yaunoziva 100% uine chokwadi chekuti hakuzove nemabhugi kana kusagadzikana, (Mune izvi ruremekedzo ndinoda Debian zvirinani izvo).
2.- Kune chete shanduro dze x86 ne AMD64, ndiko kuti, havatsigire ARM, PPC… nepo Debian ichitsigira akawanda maumbirwo.
3.- iyo tsanga, muDebian, ndinogona kusarudza kernel yandinoshandisa, Linux, BSD, Hurd (kunyangwe iyo yekupedzisira isina kugadzikana),…. Kunyangwe isiri muArch, arch ingori GNU / linux distro nerutsigiro rwe x86 uye amd64, nepo Debian ichiedza kuve OS yepasirese, zvese mumeso uye maumbirwo.
Kwandiri OS yakakwana ichave musanganiswa weArch naDebian, iyo KISS system ine chimwe chinhu chakafanana neAUR, yakagadzika saDebian (kubvira kuisa kubva kuAUR ibasa rako chete), nerutsigiro rwevakawanda hwekuvaka uye tsanga senge Debian.
Iko kune kuyedza kugadzira yakagadzika Arch: KaOS.
Pamwe, asi KaOS iri padyo nemhando yekusunungurwa iyo Slackawre naDebian vanayo.
Chakra yaienda nenzira imwe chete. Ingotarisa mavhezheni eVLC anoburitswa neiyo yega ISO ane akati wandei vhezheni dzakura kupfuura yazvino. Izvo zvakafanana neiyo ISO's yeiyo system
KaOS haina chekuita nazvo, ichiri kushandisa pacman, asi haina kubva paArch, haina kushandisa repos yayo, haina zvakafanana maitiro mukati mavo, zvirizvo kana iyo wiki info (zviri pachena kuti pachave nechimwe chinhu. kuti kana, semuma distros ese) inotsigirwa.
Zvirinani, neArch, ini ndakanga ndisina matambudziko makuru kune chero dambudziko rinogona kugadziriswa neWiki.
Kunyorerana ini ndekwekuti ... Kana iwe uchifanira kugadzirisa zvikuru iwe unogona kushandisa hupenyu hwako kuumbiridza uye kana chimwe chinhu chikatadza pamusoro ... pufff, unogona kutangazve kusangana asi ini handizive ... Chokwadi chiri kutonhorera Arch ... Inoenda sepfuti uye mapakeji akamiswa senge ndege.
Ini handizive kana mhinduro yako yanga iri kwandiri 🙂
Asi ini ndinobvumirana newe, kubva pane yangu chaiyo maonero, nemidziyo yezvino zvinoita sekutambisa kwekuunganidza nguva inodiwa kuitira shoma kuwana mukuita iyo distros senge gentoo inopa.
Pane mubvunzo unogara uchimuka mumusoro mangu ... Kune vanhu vanobvunza kugadzikana zvakanyanya zvichienzaniswa nekuve neshanduro dzichangoburwa, asi ... izvi hazviite kuti sisitimu iwedzere kusachengeteka?
Zvekuchengetedza zvigamba zvinogona kunonoka zvichingodaro.
Iyo yazvino vhezheni haigari yakanyanya kugadzikana, fungidzira software ine shanduro 2.7 uye 3.0alpha1, muna 2.7 zvese zvakanaka asi muAlpha pane zvitsva zvinoshanda izvo imwe yacho yanga isina asi izvo zvisati zvagadzikana 100%.
Haa, kana izvo ini ndatozvinzwisisa, uye chokwadi hachisi chekuti ini ndinofunga kumirira shanduro dzekupedzisira (izvo zvinonditsamwisa kuri kumirira kuti ndikwanise kuyedza vhezheni yekupedzisira vhezheni, kwete alpha kana beta). Zvinondinetsa inyaya dzekuchengetedza dzinogona kusangana neshanduro yechinyakare yemamwe mapurogiramu.
Semuenzaniso, ini ndinorangarira kuti Mageia repos yakaisa Firefox 18.0 nekuti yaive yakagadzikana vhezheni, pachinzvimbo cheiyo 22-23 vhezheni yenguva iyoyo, iyo yakandiita kuti ndiite, handizive kana nezvikonzero zvakawanda, zvisina kuchengetedzeka zvakanyanya.
Kazhinji, migove iri mukutarisira kwekugadzirisa, kuisa uye mune dzimwe nguva kudzosera kumashure zvidziviriro zvakaburitswa neukova kumusoro. Kana iwe ukatarisa ma distros senge debian vane inotevera fomati muzita repakeji xxxx-yyy-z- $ arch.deb uko z ndiyo vhezheni yepakeji (kwete software) mune yekuchengetera. Ndokusaka debian rakatsiga, redhat uye vamwe vachiramba vaine zvekuchengetedzwa nyowani kunyangwe paine mapakeji kubva kuJurassic nguva.
Kana paine Arch yeARM, muchokwadi pane yeRaspberry pi
Pane zvirongwa zvekugadzirisa chiperengo chako, muchiitiko chakajeka chekuti hauna mazwi akakwana ekudzivirira kuita zvikanganiso izvi ... izwi rekuti "echo" mumamiriro aunoshandisa harimo. zviripo kune Raspberry pi zvingave "zviripo kune Rasperry pi"
Ini ndinogara ndichinetseka kuti sei Pacman iri Rakanakisa Pasuru Sisitimu (tm) Ndeupi mashandiro arinayo ayo anoiisa pachikwiriso chakakwirira kudaro? Delta inogadziridza? Kugona kubata akawanda akachengetedzwa? Kugadziriswa kuri nyore? Mapulagi?
Gentoo neLinux kubva pakutanga kudzidza chimiro cheLinux zvakakwana
Asi Debian kugara basa uye kukura
Ubuntu ndeyekutarisa tsamba yako uye kwete zvimwe zvakawanda.
Iyo yakaiswa sezvayakaitwa kubva pakutanga (kana ndiri kukanganisa?) Nekuti ini ndinorangarira kuti pandakanga ndichida kuisa mandraque 7 cd mune amd586 ine 8mb mu RAM uye kuti ini handina kuzombogona. Iyo yekumisikidza interface yakandibvunza kuti ndigadzire zvikamu zvandaisatomboziva, uye zvakare yakandibvunza ini nzvimbo yedesktop yandaida kuisa uye mapakeji api.
Izvo zvinoitika ndezvekuti Arch idistro isina QA, saka yega yega inokwanisa kugadzirisa matambudziko anoonekwa mukuvandudzwa.
Iniwo ndakarwara neshanduroitis, asi mamwe matambudziko aigara achingodzokororwa mumatanho ekuumbisa aya akandigonesa kufunga.
Saka zvandaikoshesa zvakachinja uye ini zvino ndoshandisa Debian Wheezy.
Ini ndiri kunyanya kufarira kudzikama kwete iko chaiko kwemapakeji. Ini ndakatosiya Fedora inoita kwandiri kunge ndiyo yazvino uye yakagadzikana distro panguva imwe chete. Chandinoda kugadzikana kuzere, saka ini ndinongokurudzira maviri ekuparadzira linux. .Debian neCentOS mumatavi avo akatsiga.
Aya ndiwo maristros akanakisa uye nzira yekugadzira, kuita uye kugadzikana 😀
Uye usakanganwa Slackware futi!
Ini ndinoda kugoverwa uku, nekuda kwekuita kwayo kukuru, kunze kweizvozvo zvinongounza kana kuti, uchave uine akaiswa mapakeji iwe aunoda, ayo kwandiri, ndine akati wandei ekuyedza masevhisi ekudzidza kwangu uye ini ndakuwana kwakanyanya, kure kure.
Ndakaedza Debian uye handina kuifarira, nekuda kwechikonzero chakataurwa pamusoro.
Ok, iyo yekuvandudza inogona kuva maviri-anocheka pfumo, asi izvo, sekutaura kweshamwari, ini ndinopa vhiki kuti ndigadzirise, kunze kweizvozvo ini ndinotarisa kune yepamutemo peji kuti ndizive nezve chero nyaya.
Ini ndinofunga kuti novice kana ane ruzivo, zvisinei nekurudziro, kudzidza kwacho kuchanyanya kwazvo.
Izvo zvese zvinoenderana nechishuwo uye kutsungirira zvaunofanira kudzidza.
Iyo yakanaka kwazvo distro, ini ndakaedza kuyiyedza kunyangwe iyo ka2 nguva yakandiomesera, kutanga negedhi uye kumisikidzwa kweDNS, kunyangwe kugadzirisa mafaera eArch yaive imwe uyezve neXorg, kwete izvo chikonzero chandichaita pasi ndakakwanisa kuyedza pane imwe PC, uye ndosaka ndichiziva kuti zvakanaka, ikozvino zvayakachinja kuita systemd ndinofunga ndichaedza kuiisazve, kuti ndione kana isingapi. ini zvikanganiso zvakafanana (handipomeri distro, ini ndaigona ini kupa, asi kana BSD, gento, yaifanira kunge yakaita chimwe chinhu chakadai kwandiri)
Uye zve versionitis, sezvavanotaura "buntu", iyo yandakatarisa uye mamwe mapakeji asina kugadzikana anoshandisa, kune newbies ini ndinongokurudzira mint, handizvifarire, nekuti kwete mindi, suse, mageia, uye ndinozvitaura nekuti ndizvo nyore kuisa uye kuve nepaneru yemahwindo maitiro ekudzora nekuti newbies anogara achibva kunzvimbo iyoyo.
Asi seimwe posvo pane iyo blog, iyo iyo yakanaka zvinoreva kuti ndiyo distro yemunhu wese, kumwe kurwa kusingaperi mu gnu / linux mapakeji, ayo apt-tora, pacman, rpm, uye vamwe mumwe nemumwe waanofarira uye achiti yevamwe «ivo vanononoka, vasingakwanise kutsvaga injini, zvinotora nguva yakareba kuisa uye yakareba, nezvimwe», pano ini ndinogovana maonero angu, mamaneja ese anoshanda zvakaenzana, vanopedzisira vaisa repository package, saka zvingave zvisina kunaka kushandisa Imwe kana imwe.
Mhoro kwandiri, pachezvangu, mint inoita senge chinhu chakanakisa chandakaedza, dai zvisiri nekuti ine software dzekare ndaizoishandisa. Zvinotaridzika kwandiri senge yakabudirira sarudzo (zvirinani kuzvienzanisa neOpenSUSE, Mageia, nezvimwewo), kunyanya newbies. Ini ndinoikurudzira kune chero munhu anotanga paGnu / Linux. Mushure meizvozvo chinhu chega chandinokurudzira ndiFedora naArch kana Manjaro, ayo, zviripo, ndiwo andakada zvakanyanya kusvika parizvino
Zvakanaka, ini ndinoona arch ine maziso akanaka, ayo pro mapakeji akagadziridzwa zvakanyanya uye ini pachezvangu ndinoda pacman kupfuura apt-tora, zvinoita kwandiri kuti kana ari mapakeji avanoda kupfuura madhiri. Yakanakira kuravira kwemavara ini ndinofunga iwe unoona huzivi hweiyo distro uye ndosaka uchisarudza 🙂
Carlos iwe unogona kugovera nhanho-nhanho nhungamiro yemabatiro awakaita iwe dhizaini iwe yaunoratidza pano
Ipfungwa yakanaka! Ndine chimwe chinhu pamoto uye pandichachipedza, pamwe ndichadaro
Zvakanaka, ndakaverenga angangoita ese makomendi uye ini ndinobvumirana neakawanda. ArchLinux haina kuoma zvachose kana iwe uchinzwa sekuverenga uye kudzidza. Ini ndinofunga ndiko kugoverwa kwakanakisa uye kupesana nezvinofungwa nevanhu vazhinji, yakagadzikana kwazvo distro. Zvirinani handina kunge ndave nematambudziko akakomba.
Ini ndoda kuziva kuti nguva dzandakaisazve ndakazviita nekuti ini ndoda kuve nehurongwa uye / kumba zvakachena kwazvo. Uyezve, se dzimwe nguva ndine yakawanda nguva "yeku fart" ini ndinotanga kudzoreredza, mushure mekuyedza mamwe ma distros.
Nhasi, yangu ArchLinux haisi kuchinja chero chinhu.
Izvozvi ndakatora mukana wekuti ndapedza makirasi kugadzirira muchina wangu nekuisa Arch + Cinnamon, zvakanditorera makumi maviri kuyedza (hongu, sezvaunonzwa o_O) kudzamara ini ndazokwanisa kukwidza network (isina waya kunyanya nekuti iri Laptop), isa iyo Display Manager (ndinonamira neLightdm asi kwete Ubuntu, MDM haina kundishandira panguva ino), iyo desktop desktop (Cinnamon isina GNOME: D) uye odhiyo yangu, vhidhiyo uye mamwe mapakeji
Zvinotaurwa nevazhinji ichokwadi, gwara rekutanga reiyo arch ibatsiro rakakura, kunyange riri rekudzidza kubata zvinoenderana nekuti dzimwe nguva unofanirwa kuenda kune imwe chinyorwa kana zvinhu zvakaita sekuisa muEFI kana static IP inoita kunge (mune yangu nyaya, kunyangwe isingarwadze kana ichibatsira vamwe) haishande kune wese munhu, asi zvikasadaro ini ndatova nayo ichimhanya pasina matambudziko uye nezvose zviri kushanda, pamwe nekuisa zvishoma zvishoma izvo zvandinonyatsoda panguva iyoyo
Ini ndinongotora maviri, asi chokwadi ndechekuti ndiri kufara kwazvo nazvo.
Iyo yakagadzikana kwazvo yandakaedza, iwe unofanirwa kuverenga nhau kubva kuiyo wiki
Kutenderera uye zvinenge zvese kusvika kwekupedzisira
iyo wiki uye maforamu
Allan McRae, muchina
Pacman the best package maneja uyo pamwe chete nemutakuri, iwe unayo zvese
Ndine rutsigiro rwakanaka rweiyo GMA500
Archlinux haina kunetsa kuisa, inogona kunge ichityisa asi, haina kunyanya kushata
Kurwisana del Valle akadaro
Arch yakanaka, ini ndinoifarira kupfuura gentoo nekuti zvinotora nguva shoma yekumisikidza pamubhadharo wepasi-zviwanikwa, ndanga ndichiishandisa kwemakore mashanu, asi pane chimwe chinhu chandiri kucherechedza uye iri yakaderera mhando parizvino muAUR mapakeji.
Pindura Marcial del Valle
@ Carlos.Guide… «Zvakadii nezvekupfeka leggings ine mavara ane gaudy»?
Mushure mekuyedza kuwanda kwakawanda, ini ndinonamira neArch. Ine mukurumbira wekuomeswa, asi zvinongo gomesa chete kuisa, mushure mezvo zvinoita senge iri nyore distro kubata iyo yandakawana. Uye nezve kugadzikana, ne xfce chokwadi ndechekuti ini handina kana matambudziko, uye pandakava navo nepakeji, zuva raitevera paive neyakagadziriswa kuigadzirisa.
Nenzira, iro tafura rinotonhorera kwazvo. Ndechipi dingindira rinoshandisa iwe?
Nezuro husiku, ndakaiisa pakombuta yedesktop, hahaha ndakanga ndisina kusarudza, nekudaro, nekuda kwekushayikwa kwenzvimbo yedhisiki rakaomarara, uye nekuda kwekushaya nguva.
Nezuro ini ndakazofunga kuisa uye ini ndiri kupfuura kufara nazvo, inokwira nekukurumidza, inodzima nekukurumidza uye mapakeji akagadziridzwa zvakanaka 🙂
Zvino, ini ndoda kupa kumwe kwekubata kwekubata, iyo Chromium zvakanyanya kunyanya, iyo ine zvishoma zvakashata menyu.
Uye zvirinani kuchinjisa iptables, kuti uone ruzivo neiyo systemd
Ndozvandaida zvakanyanya nezve iyi distro, iyo systemd 🙂
Ndanga ndichingoishandisa kwemwedzi mitatu. Arch + KDE, uye ndinoshamiswa nekugadzikana kwayo, ini handina kana zvikanganiso uye zvese zvinomhanya chaizvo.
Zvino, maererano "nenjodzi" inoitika mune yega yega yekuvandudza, ini ndinoona zvichikurudzirwa kuita mabhakopu eOS neclonezilla, saka chero njodzi, dzosera uye enda.
Ini ndinoda debian kuti kana iwe uchida iine kumisikidza kumwe kuomarara uye iwe unogona kuita zvese nekunyaradza kana kana iwe uchida mu graphic mode uye dzakasiyana nzira dzekumisikidza, iyo ini yandisiri kuona yakawanda ye arch nekuda kwekuoma kwayo kubvira ne debian uye yayo kumisikidza Nyanzvi nzira nekonioni ichave iri =, uye kugara uchinyora chete geek inoifarira uye kana ndichida yakasimba sedombo ndinofanira kugadzikana kana ndichida iyo nyowani yandaifanira kuve nayo uye ndizvo uye ndichagara ndine marekodhi zvese zvandinoda
Ini handione chero chinhu chinoshamisa kune ach kana akaomarara uye akaomesesa distros kunyangwe ayo anofanira kunyorwa kunyangwe zvikaitika
Ini ndinojekesa, hazvidi kuti uve neimwe komputa padhuze, pamwe zvaizokwana kana iwe uchida kupurinda chikamu chePDF kana bhuku remanyorero rawakatora kuti riiswe kana kana risiri basa rakawanda kukopa neruoko pamwe chinhu chakakosha.
Chokwadi ndechekuti handizive kutya kwavanogona kuwana Archlinux, ini pachangu ndakazvishandisa nguva yapfuura asi zvinonetesa kana zvese uye zvese zvese zvichifanira kuitwa nemaoko (nenzira iyi unodzidza nekuti unodzidza) uye zvakanaka, Ini ndaishandisa mune ipapo Gnome Shell uye mune iyo Pacman -Syu ####! Crassshhh! - Sisitimu yangu yakaenda pasi, saka ndakaenda kuUbuntu nekuda kweruzivo rwangu rwepamberi neiyi distro uye nekuda kwenyaya yepa ppa, ikozvino ini ndirimo uye nekudaro, ndichishandisa virtualized W8.1 yezvimwe zvirongwa zveVisual Studio 2013 uye .NET
PS. uye, zvinoenderana nezvavanotaura pamusoro peizvi Chekupedzisira chakakwenenzverwa.
Ini handibvumirane: Arch Linux ndeye KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA, KUZIVA KWEVANA VANODA UP-TO-DATE SYSTEM uye FUCKING SOLID uye STABLE.
Zviripachena kuti zvinofanirwa kuve neakajeka mashoma pfungwa pamusoro peGNU + Linux, asi kusaziva kwavo hakuna nzira kunoratidza kuti Arch Linux "yakaoma".
Gentoo, kune rimwe divi, i "yakaoma" uye "inonetsa" => "yakaoma" distro. Chero ani zvake ane ruzivo rwushoma anogona kurushandisa zvakachengeteka, asi sezvo manejimendi ayo ari "swampy" zvinopinda mune pfungwa ye "kuoma" zviri nyore kupfuura Arch.
Kana paine hwomutambarakede uye nyore kushandisa-distro iyo Arch, yakagadzirirwa kubva pasi kusvika pakuve mudiwa weipi sysadmin.
Julius vinachi akadaro
Yakanakisa chaizvo yakanangana nenyaya maererano nekatarisiro kare ini ndakaedza dhivhoni base kana debian basic isina nzvimbo yekuona yemaseva asi zvinondiita kuti ndide kuziva Arch Linux kubva pane zvandinoona zvichikosha kuita zvese nhanho nhanho kubva muzvikamu zvandanga ndisina chokwadi nazvo matura ari muThe source.list Arch linux ine dura rayo repamba madhiraivha akajairika.Regai nditsanangure kana ndikaenda kuisa pasina internet kana zvakaita Ubuntu inondibvunza kuti ndive neinternet yekuisa madhiraivha akajairika uye kutsamira.
Zvakanaka ndinoti kuonekana nenharaunda yese.
Pindura kuna Julio Vinachi
Arch iri kungoshandisa Linux kunakidzwa kwekudzidza, Gentoo kana iwe uchida masochism neLinux Kubva kuKutanga kana iwe uri Martians kana gurus; uye yeshamwari dzedu dzinodiwa uye dzisingabatsiri Windowslerdos neLinux Mint ichave inopfuura zvakakwana uye ivo vachanzwa munzvimbo yepasi rese chiteshi.
Nyowani nyowani inokanganisa GNU / Linux yakasimbiswa neSymantec
Gadziridza kernel kune OpenSUSE 13.1